ဟဒီးဆ်: အကြင်သူသည် ငါကိုယ်တော်၏ ဤဝုဿူပြုနည်းအတိုင်း ဝုဿူပြုလုပ်ပြီး ဆွလာသ်နှစ်ရကအသ် ဆောက်တည်မည်။ ယင်းနှစ်ရကအသ်ထဲတွင် စိတ်ထဲမှစကားပြောခြင်း (ဟိုဒီတွေးခြင်း)မပြုလျှင် ထိုသူယခင်က ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များ ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အကြင်သူသည် ငါကိုယ်တော်၏ ဤဝုဿူပြုနည်းအတိုင်း ဝုဿူပြုလုပ်ပြီး ဆွလာသ်နှစ်ရကအသ် ဆောက်တည်မည်။ ယင်းနှစ်ရကအသ်ထဲတွင် စိတ်ထဲမှစကားပြောခြင်း (ဟိုဒီတွေးခြင်း)မပြုလျှင် ထိုသူယခင်က ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များ ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု။ . ဝုဿွူပြုခြင်း။ . ဝုဿွူပြုလုပ်ရမည့်ပုံစံ။ .
عن حمران مولى عثمان أنَّه رأى عثمان دعا بوَضُوء, فأفرَغ على يَدَيه مِن إنائه, فغَسَلهُما ثلاثَ مرَّات، ثمَّ أدخل يَمينَه في الوَضُوء, ثمَّ تَمضمَض واستَنشَق واستَنثَر، ثُمَّ غَسل وَجهه ثَلاثًا, ويديه إلى المرفقين ثلاثا, ثم مسح برأسه, ثمَّ غَسل كِلتا رجليه ثلاثًا, ثمَّ قال: رأيتُ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- يتوضَّأ نحو وُضوئي هذا، وقال: (من توضَّأ نحو وُضوئي هذا, ثمَّ صلَّى ركعتين, لا يحدِّث فِيهما نفسه غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه).
အွတ်စ်မာန်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)၏ သူကောင်းပြုခံရသည့်ကျွန် ဟုမ်ရာန်ကဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ သူသည် အွတ်စ်မာန်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)အား ဝုဿူပြုရန်ရေတောင်းသည်ကို တွေ့ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် အွတ်စ်မာန်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)သည် အိုးထဲမှရေကို လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ပေါ် လောင်း၍ သုံးကြိမ် ဆေးကြောခဲ့သည်။ထို့နောက် မိမိညာလက်ကို အိုးထဲထည့်ပြီး ရေယူကာ ပလုတ်ကျင်းသည် ၎င်းနောက် နှာခေါင်းတွင်းရေရှူသွင်းပြီး ညှစ်ထုတ်ကာ သန့်စင်မှုပြုလုပ်သည်။ တဖန် မိမိမျက်နှာကို သုံးကြိမ်ဆေးကြောသည်။ ပြီးနောက် လက်နှစ်ဖက်ကို တံတောင်ဆစ် အပါအဝင် သုံးကြိမ်ဆေးကြောသည်။ ထို့နောက် ဦးခေါင်းကို မစဟ်ပြုပွတ်သပ်သည်။ ပြီးနောက် မိမိ၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ခြေမျက်စိအပါအဝင် သုံးကြိမ်ဆေးကြောသည်။ ထို့နောက် ပြောကြား သည်မှာ ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် ကျွန်ုပ်၏ ဤဝုဿူအတိုင်း ဝုဿူပြုတော်မူသည်ကို ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်က မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အကြင်သူသည် ငါကိုယ်တော်၏ ဤဝုဿူပြုနည်းအတိုင်း ဝုဿူပြုလုပ်ပြီး ဆွလာသ်နှစ်ရကအသ်ဆောက်တည်မည်။ ယင်းနှစ်ရကအသ်ထဲတွင် စိတ်ထဲမှစကားပြောခြင်း(ဟိုဒီတွေးခြင်း)မပြုလျှင် ထိုသူယခင်က ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်များ ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။
ကြီးကျယ်လှသော ဤဟဒီးဆ်တော်တွင် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ ဝုဿူလုပ်သည့်ပုံစံကို အပြည့်အစုံဖော်ပြထားသည်။ အွတ်စ်မာန်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)သည် ထိရောက်စွာသင်ကြားပေးရန်နှင့်ကောင်းမွန်စွာ သဘောပေါက်နားလည်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့အား တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) ဝုဿူပြုလုပ်ပုံကို လက်တွေ့နည်းလမ်းဖြင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သူသည် ရေအိုးတစ်လုံးကိုတောင်းပြီး ၎င်းရေကိုမသန့်မဖြစ်စေရန် ရေထဲသို့လက်မနှစ်ဘဲ လက်နှစ်ဖက်ကို သန့်ပြန့်သွားရန်သုံးကြိမ်ရေလောင်းခဲ့သည်။ ပြီးနောက် လက်ယာလက်ကို ရေအိုးထဲထည့်၍ ရေယူကာပလုတ်ကျင်းပြီး နှာခေါင်းတွင်း ရေရှူသွင်းခဲ့သည်။ တဖန် မိမိမျက်နှာကို သုံးကြိမ်ဆေးကြောခဲ့သည်။ ပြီးနောက် လက်နှစ်ဖက်ကို တံတောင်ဆစ်အပါအဝင် သုံးကြိမ်ဆေးကြောခဲ့သည်။ ထို့နောက် မိမိဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးကို တစ်ကြိမ်မစဟ်ပြုပွတ်သပ်ခဲ့သည်။ ပြီးနောက် မိမိရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ခြေမျက်စိအပါအဝင်သုံးကြိမ် ဆေးကြောခဲ့သည်။အွတ်စ်မာန်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)သည် ဤပြည့်စုံသောဝုဿူအား လက်တွေ့ပြသပြီးနောက် ဤအတိုင်းပင် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ဝုဿူပြုခဲ့သည်ကို မြင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က ၎င်းတို့အားမိန့်ကြားသည်မှာ အကြင်သူသည်ကိုယ်တော်၏ဝုဿူအတိုင်း ဝုဿူပြုပြီး ဆွလာသ်နှစ်ရကအာသ်အား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရှေ့တော်မှောက်၌ ကျိုးနွံနှိမ့်ချစွာဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားလျက် ဆောက်တည်ခဲ့သော် အရှင်မြတ်သည် မိမိ၏ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ၎င်းအား ထိုပြည့်စုံသောဝုဿူနှင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက် သီးသန့် ဆောက်တည်သော ဆွလာသ်အပေါ် အစားပေးသည့်အနေဖြင့် သူ၏ လွန်ခဲ့သောအပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာ ပေးတော်မူမည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ရုရှား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) တဂ္ဂလော့ ဟင်ဒီ ဗီယက်နမ် ဆင်ဟာလီ ဝီဂါ ကာ့ဒ် ဟောက်ဆာ ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ်
မုအ်မင်န်တို့၏ ခေါင်းဆောင် အွတ်စ်မာန်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)၏ မွန်မြတ်မှုနှင့် သာသနာ့ပညာနှင့် စွန္နသ်ကို ဖြန့်ချိရာတွင် ၎င်း၏ စိတ်အားထက်သန်မှုကို သိရှိရသည်။
လက်တွေ့ သင်ကြားပေးခြင်းသည် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ပို၍လည်း တိကျသေချာသည်။
အိပ်ရာမှနိုးထလာသူမဟုတ်ပါက ဝုဿူအစပြုရာတွင် ရေအိုးထဲသို့လက်မထည့်မီ လက်နှစ်ဖက်အား ဆေးကြောခြင်းသည် မွတ်စ်သဟဗ်ကောင်းမြတ်ပေသည်။အကယ်၍ ညအိပ်ရာမှ နိုးထလာသူဖြစ်လျှင် လက်နှစ်ဖက်အား ဆေးကြောရန် ဝါဂျစ်ဗ်တာဝန် ဖြစ်သည်။
အကြင်သူသည် အိဗာဒသ်ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်သာပြုသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ လူတို့အားသင်ကြားပေးရန်လည်း ရည်ရွယ်ခဲ့လျှင် ထိုသူ၏ အိခ်လာဆွ်တွင် လျော့နည်းမှုမဖြစ်ပေ။
ဆရာသည် သင်ကြားရာ၌ နားလည်သဘောပေါက်စေရန်နှင့် ပညာစွဲမြဲစွာမှတ်သားမိစေမည့် အနီးစပ်ဆုံးနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရမည်။
အိဗာဒသ်ပြုသူသည် လောကီအရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်သည့် အတွေးများကိုဖယ်ရှားရမည်။ ထိုသို့သော အတွေးများ မဖြစ်ပေါ်လာစေရန် စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော လူသားသည် ဆွလာသ်ဆောက်တည်နေချိန် မိမိစိတ်ဝင်စားသည့်အရာများ ဝင်ရောက်လာတတ်သည်။
ဝုဿူပြုခြင်းနှင့် ဝုဿူရေဖြင့်အစိတ်ပိုင်းများကို ဆေးကြောသည့်အခါ ညာဘက်ဖြင့် အစပြုခြင်းသည် မွတ်စ်သဟဗ်ဖြစ်သည်။
ပလုတ်ကျင်းခြင်းနှင့် နှာခေါင်းတွင်းရေရှူသွင်းပြီး ညှစ်ထုတ်ကာသန့်စင်မှုပြုလုပ်ခြင်းတို့အား အစဉ်အလိုက်ပြုလုပ်ရန် ပြဌာန်းထားသည်။
မျက်နှာကို သုံးကြိမ် ဆေးကြောရမည်။
ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးအား တစ်ကြိမ် မစဟ်ပွတ်သပ်ရမည်။
ခြေထောက်နှစ်ဖက်အား ခြေမျက်စိအပါဝင် သုံးကြိမ်ဆေးကြောရမည်။
ဝုဿူကို အစဉ်လိုက်ပြုလုပ်ရန် ဝါဂျစ်ဗ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ဦးခေါင်းကို မစဟ်ပြုရန် အမိန့်ပေးထားသည်။ ယင်းအမိန့်တော်အား ခြေနှစ်ဖက်ဆေးကြောခြင်းနှင့် ကျန်အစိတ်ပိုင်းများဆေးကြောခြင်းတို့ကြား၌ ဖော်ပြထားခြင်းသည် ဝုဿူကိုအစဉ်လိုက်ပြုလုပ်ရန် ဝါဂျစ်ဗ်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။
ဤပုံစံသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ ပြည့်စုံသောဝုဿူပုံစံဖြစ်သည်။
ဝုဿူပြုပြီးနောက် ဆွလာသ်ဆောက်တည်ခြင်းကို သာသနာကပြဌာန်းထားသည်။
ဆွလာသ်ပြည့်စုံမှု၏ အကြောင်းခံတစ်ရပ်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရှေ့မှောက်၌ စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဟဒီးဆ်တော်၌ အိခ်လာစ်ကိုတိုက်တွန်းထားပြီး ဆွလာသ်၌ လောကီရေးကိစ္စများကို စိတ်ဝင်စားနေသူ၏ ဆွလာသ်သည် လက်ခံခြင်းခံရမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။အကြင်သူ ဆွလာသ်ဝတ်ပြုနေစဉ် လောကီအတွေးများ ရုတ်တရက်ပေါ်လာသဖြင့် ယင်းအား ဖယ်ရှားခဲ့လျှင် ထိုအပေါ်အကျိုးကုသိုလ်ရရန် မျှော်လင့်ရသည်။
လက်နှစ်ဖက်ကို တံတောင်ဆစ်အပါဝင် သုံးကြိမ် ဆေးကြောရမည်။
ကိစ္စရပ်နှစ်ခုစလုံးအား တစ်ဆက်တည်းပြုလုပ်မှသာ ကတိပေးထားသည့် အကျိုးကုသိုလ်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁) တင်ပြထားသည့်ပုံစံအတိုင်းဝုဿူပြုခြင်း၊ (၂) ၎င်းနောက် ဆွလာသ်နှစ်ရကအသ်ကို ဖော်ပြထားသည့်ပုံစံအတိုင်း ဆောက်တည်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ဝုဿူနှင့် ဆွလာသ်နှစ်ရကအသ်အား ရိုကျိုးစွာဖတ်ခြင်း၏ အကျိုးမှာ လွန်လေပြီးသော အကုသိုလ်များကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု။ . ဝုဿွူပြုခြင်း။ . ဝုဿွူပြုလုပ်ရမည့်ပုံစံ။ .
ဟဒတ်စ် (ဝူဿွူပျက်ခြင်း)ဖြစ်သွားလျှင် ဝူဿွူပြန်မလုပ်မချင်း အသင်တို့အနက် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ဆွလာသ်ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် လက်ခံတော်မူမည် မဟုတ်ပေ။
عربي English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski Русский বাংলা ভাষা 中文 فارسی Tagalog हिन्दी Tiếng Việt සිංහල ئۇيغۇرچە كوردی Hausa Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ்
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ရုရှား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +တဂ္ဂလော့ +ဟင်ဒီ +ဗီယက်နမ် +ဆင်ဟာလီ +ဝီဂါ +ကာ့ဒ် +ဟောက်ဆာ +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ်